.ရယေုနျဆိုတာ ဘာလဲ…? ဘယျလို ကုသရမလဲ….? – Askstyle
.ရယေုနျဆိုတာ ဘာလဲ…? ဘယျလို ကုသရမလဲ….?
ရေ ယုန် ဆို တာ ?
ရေယုန်ပေါက်ခြင်းသည် အနောက်တိုင်း ဆေးပညာအရ ဟားပီး (Herpes) ဟုခေါ်သော ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ရေယုန် (Herpes Simplex) နှင့် ရေယုန်ကြီး (Herpeies Zoster) ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိပြီးတော့ ရေယုန်ကြီးကို မြန်မာအခေါ် ဆင်ရေယုန်ဟုလည်း ခေါ်ပါတယ်။ အရေပြားအောက်မှ ပြန်ရည်ကြောတလျှောက် အမှီပြု၍ ပွားများပြီး အာရုံကြောကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်သော ဗိုင်းရပ် (ခ) ပိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ရေယုန်သည် လေနှင့် နေရောင်ခြည် အထိအတွေ့ နည်းသော ချိုင်းအောက်၊ ရင်ဘတ်စသည် နေရာများတွင် ပို၍ ပွားလွယ်သည်ကို တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခါးတွင် ရေယုန်ပတ်ပြီး ပေါက်လျှင် သေတတ် သည်ဟု ရှေးလူကြီးများက ပြောကြပါတယ်။ ရေယုန်ဖြစ်လျှင် ပေါ့ပေါ့ မနေရန် ပြောခြင်းဖြစ်မည် ထင်ပါတယ်။ ခါးပတ်၍ ရေယုန်ပေါက်လျှင် အမှန်ပင် ပျောက်ခဲပြီး ရက်ကြာပါတယ်။ ယခုခေတ်တွင် ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကျသည့်ရောဂါ (AIDS) ဝေဒနာသည်များတွင် ရေယုန်ကြီးများ ပေါက်သည်ကို တွေ့ရှိလာရသဖြင့် ရေယုန်ကြီး ဖြစ်သူများကို ဆရာဝန်ကြီးများက (HIV)ပိုး ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
အာယုဗေဒ ဆေးပညာမှ ရေယုန်ရောဂါ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရှေးနှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အာယုဗေဒ ဆေးပညာကျမ်းများကို လေ့လာကြည့်သောအခါ ရှေးကပင် ရေယုန်ရောဂါနှင့် ကုထုံးများ ရေးသားမှတ်တမ်း တင်ထားပါတယ်။
ရေယုန်ဟာ အပူနာတစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ်အပူချိန်ငွေ့ငွေ့နှင့် အဖျားတတ်လာတတ်ပါတယ်။ သို့သော် ရေယုန်ပိုးသည် အဖျားပိုးတော့ မဟုတ်ပါ။ အရေပြားနှင့် အာရုံကြောများကို ရောင်စေသော ပိုးသာဖြစ်ပါတယ်။ ရေယုန်ဖြစ်လျှင် ရေမချိုးရ၊ ရေထိလျှင် ပွားတက်သည်ဟု ဆိုကြပါတယ်။ အမှန်က ရေမချိုးလျှင် ကိုယ်အပူချိန် ပိုတက်လာပြီး ဖျားနိုင်ပါတယ်။ ရေချိုးပေးပြီး အနာပေါ်တွင် ရေမတင်အောင် ဝါဂွမ်းဖြင့် သုတ်ပေးခြင်းသာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အနာသန့်စင်သည့် ဆေးရည်များ ရေခြောက်ပြီးနောက် သုတ်လိမ်းပေးပါ။
ရေယုန်အတွက် မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးမြီးတိုများ-
*ကင်းမုံရွက်ကို သန့်စင်အောင် ရေဆေးပြီး သတ္တုရည်ညှစ်ယူ အနာပေါ်တွင် မကြာခဏ သုတ်လိမ်းပေးပါ။ အရည်ဆွတ် ပေးပါက ရေယုန်နာခြောက်ပြီး မပြန့်ပွားနိုင်။
*လေးညှင်းပွင့်ကို အမှုန့်ထောင်းပြီး အနာပေါ်တွင် ဖြူးပေးပါ၊ သို့မဟုတ် သွေးလိမ်းပါ။
*ကျွန်းသားမီးသွေးကို အမှုန့်ထောင်းချေ၊ အုန်းဆီဖြင့် ဖျော်ပြီး ရေယုန်အနာတွင် သုတ်လိမ်းပေးပါ။
*ပိစပ်ရွက်၊ ကုက္ကိုရွက်များ ပြုတ်၍ ရေယုန်အနာကို ဖန်ဆေးပေးနိုင်သည်။
*နှုတ်ခမ်းထောင့်တွင် ပေါက်သော ရေယုန်နာကို ထမင်းအိုးတည်ပြီး ပွက်သောအခါ ရသည့်အမြုပ်ဖြင့် ခံနိုင်သမျှ အပူခံပြီး တို့ပေးလျှင် ပျောက်ကင်းနိုင်သည်။
*ကြောင်ပန်းရွက် အရည်ညှစ် လိမ်းပါ။ သောက်လည်းသောက်ပါ။
*ကွမ်းရွက်ကို ချေပြီး အဖတ်လေးများဖြစ်အောင် ပြုလုပ်၍ ကပ်ပေးပါ။
*ကုက္ကိုခေါက် အမှုန့်ကို ထောပတ်နှင့် ဖျော်၍လိမ်းပါ။
*ငုပင်မှ ရသော ငုရွက်သတ္တုရည်ကို လိမ်းကျံပေးပါ။
*ပူစီနံရွက် (ပူဒီနာ)ကို အရည်ညှစ်ပြီး သုတ်လိမ်းပေးပါ။ *ပူဒီနာရွက်ကို စားပေးလျှင် ရေယုန်နာ ကိုက်ခဲခြင်း သက်သာပြီး အရောင်ကျစေသည်။
*သံပုရာရည်နှင့် ပျားရည်ရောစပ်၍ သုတ်လိမ်းပေးလျှင် ရေယုန်နာ ပြန့်ပွားခြင်းကို တားဆီးနိုင်သည်။
*ရေသဖန်းပင်ကို ဓားဖြင့်ထစ်ပါက အစေးအဖြူများ ထွက်လာမည်။ ထိုအစေးဖြင့် သုတ်လိမ်းပေးပါ။
*ခွေးတောက်ရွက်ကို မီးကင်ပြီး အရည်ညှစ်၍ သုတ်လိမ်းပေးပါ။
*ရေသဖန်းရွက်ကို ပြာချ အုန်းဆီဖြင့် လိမ်းပါ။
*ညောင်ဗောဓိ အမြစ်ခေါက်ကို ရေဖြင့် ထက်ဝက်ခမ်းအောင် ကျို၍သောက်လျှင် ရေယုန်ကြီးနာ ပျောက်ပါသည်။
Ref; Chaw Lay Su
ရေ ယုနျ ဆို တာ ?
ရယေုနျပေါကျခွငျးသညျ အနောကျတိုငျး ဆေးပညာအရ ဟားပီး (Herpes) ဟုချေါသော ဗိုငျးရပျဈ ပိုးကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ သာမနျရယေုနျ (Herpes Simplex) နှငျ့ ရယေုနျကွီး (Herpeies Zoster) ဟူ၍ နှဈမြိုးရှိပွီးတော့ ရယေုနျကွီးကို မွနျမာအချေါ ဆငျရယေုနျဟုလညျး ချေါပါတယျ။ အရပွေားအောကျမှ ပွနျရညျကွောတလြှောကျ အမှီပွု၍ ပှားမြားပွီး အာရုံကွောကိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျသော ဗိုငျးရပျ (ခ) ပိုးမြိုးဖွဈပါတယျ။
ရယေုနျသညျ လနှေငျ့ နရေောငျခွညျ အထိအတှေ့ နညျးသော ခြိုငျးအောကျ၊ ရငျဘတျစသညျ နရောမြားတှငျ ပို၍ ပှားလှယျသညျကို တှရေ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ခါးတှငျ ရယေုနျပတျပွီး ပေါကျလြှငျ သတေတျ သညျဟု ရှေးလူကွီးမြားက ပွောကွပါတယျ။ ရယေုနျဖွဈလြှငျ ပေါ့ပေါ့ မနရေနျ ပွောခွငျးဖွဈမညျ ထငျပါတယျ။ ခါးပတျ၍ ရယေုနျပေါကျလြှငျ အမှနျပငျ ပြောကျခဲပွီး ရကျကွာပါတယျ။ ယခုခတျေတှငျ ခန်ဓာကိုယျခုခံအားကသြညျ့ရောဂါ (AIDS) ဝဒေနာသညျမြားတှငျ ရယေုနျကွီးမြား ပေါကျသညျကို တှရှေိ့လာရသဖွငျ့ ရယေုနျကွီး ဖွဈသူမြားကို ဆရာဝနျကွီးမြားက (HIV)ပိုး ရှိ၊ မရှိ စဈဆေးမှု ပွုလုပျလရှေိ့ပါတယျ။
အာယုဗဒေ ဆေးပညာမှ ရယေုနျရောဂါ အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျ ရှေးနှဈပေါငျး တဈထောငျကြျောက ပျေါပေါကျခဲ့သော အာယုဗဒေ ဆေးပညာကမျြးမြားကို လလေ့ာကွညျ့သောအခါ ရှေးကပငျ ရယေုနျရောဂါနှငျ့ ကုထုံးမြား ရေးသားမှတျတမျး တငျထားပါတယျ။
ရယေုနျဟာ အပူနာတဈမြိုးပါပဲ။ ကိုယျအပူခြိနျငှငှေ့နှေ့ငျ့ အဖြားတတျလာတတျပါတယျ။ သို့သျော ရယေုနျပိုးသညျ အဖြားပိုးတော့ မဟုတျပါ။ အရပွေားနှငျ့ အာရုံကွောမြားကို ရောငျစသေော ပိုးသာဖွဈပါတယျ။ ရယေုနျဖွဈလြှငျ ရမေခြိုးရ၊ ရထေိလြှငျ ပှားတကျသညျဟု ဆိုကွပါတယျ။ အမှနျက ရမေခြိုးလြှငျ ကိုယျအပူခြိနျ ပိုတကျလာပွီး ဖြားနိုငျပါတယျ။ ရခြေိုးပေးပွီး အနာပျေါတှငျ ရမေတငျအောငျ ဝါဂှမျးဖွငျ့ သုတျပေးခွငျးသာ အကောငျးဆုံး ဖွဈပါတယျ။ အနာသနျ့စငျသညျ့ ဆေးရညျမြား ရခွေောကျပွီးနောကျ သုတျလိမျးပေးပါ။
ရယေုနျအတှကျ မွနျမာ့ရိုးရာ ဆေးမွီးတိုမြား-
*ကငျးမုံရှကျကို သနျ့စငျအောငျ ရဆေေးပွီး သတ်တုရညျညှဈယူ အနာပျေါတှငျ မကွာခဏ သုတျလိမျးပေးပါ။ အရညျဆှတျ ပေးပါက ရယေုနျနာခွောကျပွီး မပွနျ့ပှားနိုငျ။
*လေးညှငျးပှငျ့ကို အမှုနျ့ထောငျးပွီး အနာပျေါတှငျ ဖွူးပေးပါ၊ သို့မဟုတျ သှေးလိမျးပါ။
*ကြှနျးသားမီးသှေးကို အမှုနျ့ထောငျးခြေ၊ အုနျးဆီဖွငျ့ ဖြျောပွီး ရယေုနျအနာတှငျ သုတျလိမျးပေးပါ။
*ပိစပျရှကျ၊ ကုက်ကိုရှကျမြား ပွုတျ၍ ရယေုနျအနာကို ဖနျဆေးပေးနိုငျသညျ။
*နှုတျခမျးထောငျ့တှငျ ပေါကျသော ရယေုနျနာကို ထမငျးအိုးတညျပွီး ပှကျသောအခါ ရသညျ့အမွုပျဖွငျ့ ခံနိုငျသမြှ အပူခံပွီး တို့ပေးလြှငျ ပြောကျကငျးနိုငျသညျ။
*ကွောငျပနျးရှကျ အရညျညှဈ လိမျးပါ။ သောကျလညျးသောကျပါ။
*ကှမျးရှကျကို ခပြွေီး အဖတျလေးမြားဖွဈအောငျ ပွုလုပျ၍ ကပျပေးပါ။
*ကုက်ကိုခေါကျ အမှုနျ့ကို ထောပတျနှငျ့ ဖြျော၍လိမျးပါ။
*ငုပငျမှ ရသော ငုရှကျသတ်တုရညျကို လိမျးကြံပေးပါ။
*ပူစီနံရှကျ (ပူဒီနာ)ကို အရညျညှဈပွီး သုတျလိမျးပေးပါ။ *ပူဒီနာရှကျကို စားပေးလြှငျ ရယေုနျနာ ကိုကျခဲခွငျး သကျသာပွီး အရောငျကစြသေညျ။
*သံပုရာရညျနှငျ့ ပြားရညျရောစပျ၍ သုတျလိမျးပေးလြှငျ ရယေုနျနာ ပွနျ့ပှားခွငျးကို တားဆီးနိုငျသညျ။
*ရသေဖနျးပငျကို ဓားဖွငျ့ထဈပါက အစေးအဖွူမြား ထှကျလာမညျ။ ထိုအစေးဖွငျ့ သုတျလိမျးပေးပါ။
*ခှေးတောကျရှကျကို မီးကငျပွီး အရညျညှဈ၍ သုတျလိမျးပေးပါ။
*ရသေဖနျးရှကျကို ပွာခြ အုနျးဆီဖွငျ့ လိမျးပါ။
*ညောငျဗောဓိ အမွဈခေါကျကို ရဖွေငျ့ ထကျဝကျခမျးအောငျ ကြို၍သောကျလြှငျ ရယေုနျကွီးနာ ပြောကျပါသညျ။